IoT cloud platform Tuya Intelligent ကို ဟောင်ကောင် မှာ ပွဲဦးထွက် - Pandaily
IoT cloud platform Tuya Intelligent ကို ဟောင်ကောင် မှာ ပွဲဦးထွက်
Jun 22, 2022, 21:04ညနေ 2022/06/22 23:05:29 Pandaily
NYSE တွင် စာရင်း ပြု ထားသော IoT cloud platform Tuya Intelligent သည် HKEx စာရင်း ကြားနာ ခြင်းကို အောင်မြင် ခဲ့သည်ပြီးတော့ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ ကနေ ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့အထိ ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေ သွားမှာပါ။ CICC ၊ Bank of America Securities နှင့် Morgan Stanley တို့သည် Tuya ၏ ပူးတွဲ စပွန်ဆာ များဖြစ်သည်။
Tuya Intelligent သည် အရာ အားလုံးကို အသိဥာဏ် ရှိရှိ ချိတ်ဆက် နိုင်သည့် cloud platform တစ်ခု ကိုထောက်ပံ့ ပေးပြီး အမှတ်တံဆိပ် များ၊ OEM များ၊ developer များ၊ လက်လီ ရောင်းချ သူများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားသော အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးမှု စံချိန်စံညွှန်း များ ဖန်တီး ပေးသည်။ ၎င်း၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များမှာ Philips, Schneider Electric, Lenovo စသည်တို့ဖြစ်သည်။
Tuya Intelligent ၏ ၂၀၁၉၊ ၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ တွင် ၀ င်ငွေ မှာဒေါ်လာ ၁၀၆ သန်း၊ ဒေါ်လာ ၁၈၀ သန်းနှင့် ဒေါ်လာ ၃၀၂ သန်း ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း အသားတင် အရှုံး မှာဒေါ်လာ ၇၀. ၄၈ သန်း၊ ၆၆. ၉၁ သန်းနှင့် ဒေါ်လာ ၁၇၅ သန်း ဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ် ဝင်ငွေ သည်ဒေါ်လာ ၅၅. ၃ ၂၄ သန်း ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် အလားတူ ကာလက ဒေါ်လာ ၅၆. ၈ ၆၈ သန်း ထက် ၂. ၇% ကျဆင်းခဲ့သည်။ ၎င်း၏ GAAP လည်ပတ်မှု အရှုံး သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ် တွင်ဒေါ်လာ ၃၇. ၈ သန်း ရှိခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အလားတူ ကာလက GAAP လည်ပတ်မှု အရှုံး မှာဒေါ်လာ ၂၄. ၅ သန်း ဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ မတ်လတွင် Tuya Smart သည် NYSE တွင် စာရင်းဝင် ခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ ၉၁ ၅ သန်း ရရှိခဲ့သည်။ Tuya Intelligent စာရင်းပြုစု စဉ်အတွင်း Tencent နှင့် Gaojing Capital တို့သည် ကုမ္ပဏီ အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် Tuya ၏ စျေးကွက် တန်ဖိုး သည်ဒေါ်လာ ၁၄ ဘီလီယံ ခန့်ရှိသည်။
ယနေ့ အချိန်တွင် Tuya Smart ၏ စတော့ရှယ်ယာ ဈေးနှုန်း မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂. ၄၆ ဖြစ်ပြီး စျေးကွက် တန်ဖိုး မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၃ ၇၇ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ IPO ပြီး ကတည်းက တစ် နှစ်ကျော် အတွင်း Tuya Smart ၏ စျေးကွက် တန်ဖိုး မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလီယံကျော် ကျဆင်းခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:IoT ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ Tuya Intelligent က အႀကီးအက်ယ္ အလုပ္
SEC ၏ “ကြိုတင် စာရင်းသွင်း ခြင်း” စာရင်း တွင်တရုတ် အယူအဆ စတော့ များ ပိုမိုများပြား လာသည်နှင့်အမျှ တရုတ် အယူအဆ စတော့ များသည် ဟောင်ကောင်တွင် စာရင်း ပြု ရန် စတင် ရှာဖွေ နေကြသည်။ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် April ပြီ နှင့် မေလ များတွင် Zhihu နှင့် Shell Finding House တို့သည် ဟောင်ကောင်တွင် နှစ်ဆ သော စတ င်မှု အဖြစ် စာရင်း ဝ င်ခဲ့သည်။
Two-level listing ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု သည်အခြား စတော့အိတ်ချိန်း တွင် စာရင်း ၀ င်ပြီး ပြည်တွင်း စျေးကွက် စည်းမျဉ်း များနှင့်အညီ ဟောင်ကောင် ဈေးကွက်တွင် စာရင်းဝင် ခြင်းဖြစ်သည်။ အရင်းအနှီး စျေးကွက် နှစ်ခု စလုံးသည် ပထမအဆင့် စာရင်း ၀ င် သောနေရာ များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လဲလှယ် မှု တစ်ခုတွင် စာရင်းသွင်း ထား လျှင် ပင် ၎င်း သည်အခြား လဲလှယ် မှုတွင် ကုမ္ပဏီ၏ စာရင်း အခြေအနေ ကိုထိခိုက် လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ေဟာင္ေကာင္ရွိ Nayuki လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ လူသိရွင္ၾကား ရွယ္ယာ၀င္မႈ ေလ်ာ့က်
ပထမနေ့မှာ Listenor လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရဲ့ ဈေးနှုန်းဟာ အနိမ့်ဆုံး ၁၇.၃ ယွမ်အထိ ကျဆင်းပြီး အနိမ့်ဆုံး ဈေးနှုန်းကတော့ ဟောင်ကောင်/ရှယ်ယာ ၁၉.၈ ယွမ်ဈေးပေါက်/ရှယ်ယာ ဖြစ်ပါတယ်။